अमिताभ बच्चनको सम्पत्ति छोरी श्वेता र छोरा अभिषेकको भागमा कति ? – Dainik Samchar
March 20, 2021 465
एजेन्सी । धेरैका मन र मस्तिष्कमा बसेका बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनले आफ्नो निजि सम्पत्ति बाँडफाँडको विषयलाई खुलेरै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका थिए । बलिउड उद्योगमा फिल्मलाई मात्र होइन अमिताभ बच्चनले आफ्नो पारिवारिक स्थितिलाई पनि निकै उदाहरणीय त’वरले सम्हालेर रोखेका थिए ।
उनी लैङ्गीक समानता पक्षधर हुन् भन्ने कुरा उनले ‘रियल’ र ‘रिल’ दुवै जीन्दगीमा प्रमाणित गरेका थिए । उनीे आफ्नो सम्पत्तिको हकदार पनि छोरा र छोरी दुवैलाई बराबर मान्छन् । उनले आफ्नो सम्पत्ति अभिषेक र श्वेतालाई बराबर बा’डिँदिने घो’षणा समेत गरेका थिए । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत यो कुरा सार्वजनिक गरेका थिए ।
सन् २०१७ मा ट्विटरमा उनले एक फोटो शेयर गरेका थिए, जसमा उनले प्लेकार्ड समातेका छन र क्याप्सनमा लेखिएको छ ‘हामी बराबर छौँ, फोटोले सबैकुरा बोलिरहेको छ ।’ अमिताभले बोकेको त्यस प्लेकार्डमा लेखिएको थियो ‘मेरो निधनपछि जति पनि सम्पत्ति बाँकी रहन्छ, त्यो मेरी छोरी र छोराबीच बराबर रुपमा बाँ’डिनेछ ।’
रिपोर्टहरुका अनुसार अमिताभ बच्चन ४ सय मिलियन डलर (४५, ८६२, ०००,०००) भन्दा धेरै सम्पत्तिका मालिक हुन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ की अमिताभ बच्चन समाजमा रहेको छोरा र छोरी बीचको वि’भेदको अ’न्त्य गर्न चाहन्छन् । यस कुराको उदाहरण आफू स्वयम बन्दै समाजमा सकारात्मक सन्देश दिन चाहन्छन् ।
Prevचितवनमा दुई स्कुटर दु’र्घटना हुदा २ युवतीको नि’धन
Nextआज दिन र रात बराबरी हुने
सानेपाबाट टेकु जाँदै गरेका तामाङ बिच बाटोमै प’क्राउ ! ट्याक्सी रोकेर झोला हेर्दा देखियो यस्तो !